N ingbo Shuangyu (Samewe), njengomnye Knitting Machine thefamous computer Flat abenzi, hayi khathalela kuphela ubuninzi ukuba yokuvelisa kodwa umgangatho, siye investedquite abig lodibaniso lwemali kwixesha Equipments advancedprocessing ukwandisa machinequality. Soyithabatha uqeqesho abasebenzi kakhulu ukuqinisekisa nokuphucula umgangatho imveliso.
SY52-S umatshini enoqoqosho and practical isiko ourclients. It has iingenelo ixabiso elifanelekileyo, umgangatho ozinzileyo andthe ekufuneni elifutshane elide capital outlay.The adpots umatshini ngokupheleleyoinkqubo-elawulwa khompyutha ngokudlulisela, tucking kwaye zikhawulezebuyo ibuyela kwakunye nenkqubo yolawulo motor for colorchanging. It inikeza yokusebenza ezinzileyo kunye ngesantya esiphezulu senxulumano kwayenephumelele kwi imisebenzi mkhulu, ezifana intarsia, sticth eArabha, okunezakha-mzimba, izakhiwo intambo, umnqamlezo-kwiteksti, jacquard kunye ect.
SY52-2S adpots single unwele ye bar inaliti ecikizekileyo rackingfor elikabini bar yenaliti erhabaxa,-high speed umva ukuya ngempumelelo kuzakwandisa isantya thekitting nge-20% -30%. Omabini amacala grippers yemizamo
kuthetha ngempumelelo ukunciphisa vulu inkunkuma kunye nokuphucula productivity.This series yobuchwephese useddigital ukuphumeza iipateni oftransfer, tuck, pointelle, intarsia, jacquard, kwacaca ukulungisa, ukulungisa efihlakeleyo kunye neminye imisebenzi ipateni rhoqo kitting, kube alsocan nye jacquard multi-bala, intarsia, intambo kunye nesakhiwo pointelle iipateni ezingaqhelekanga.
SY52-3S adpots single unwele ye bar inaliti ecikizekileyo rackingfor elikabini bar yenaliti erhabaxa,-high speed umva ukuya ngempumelelo kuzakwandisa isantya thekntting nge-20% -30%. Omabini amacala grippers ekugawuleni kuthetha ngempumelelo ukunciphisa vulu inkunkuma ukuphucula imveliso. Olu luhlu lusetyenziswa nobuchwepheshe yedijithali ukuphumeza iipateni of transfer, tuck, pointelle, intarsia, jacquard, kwacaca ukulungisa, ukulungisa efihliweyo kunye neminye imisebenzi ipateni ukunitha rhoqo, oko ukunitha mgaqweni multi-elimbala jacquard, intarsia, intambo kunye pointelle iipatheni isakhiwo .
" Mhle umgangatho, inkonzo Good " lisoloko imfundiso yethu mfundiso. Sithatha konke okusemandleni ukulawula umgangatho, package, neeleyibhile njl njl, kwaye QC wethu liya kutshekisha zonke iinkcukacha ngexesha ukuvelisa naphambi ngolwandle. Sizimisele ukuseka ubudlelwane ishishini nabo bafuna iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo elungileyo. Inkampani yethu iphatha umoya "ezintsha, imvisiswano, umsebenzi weqela kunye nokwabelana, ezityhutyhayo, inkqubela nesebenzayo". Sinike ithuba kwaye siya kuzingqina ikhono lethu.